Ọ bụ okwu siri ike, mana ọ dị mma ịkọwa akụkụ mbụ nke mmekọrịta ọ bụla. Okwu a metụtara ndị na-abịa na weebụsaịtị gị wee pụta ozugbo; A na-eji okwu ahụ 'ọnụego nla elu' kọwaa nke a. Ndị a bụ Ndị na -akwụ ụgwọ, ọbụnadị atụmanya n'ezie na ọkwa a. Ha bụ ndị na-abịa ụdị ịchụso, n'ihi ya, anyị na-amalite ndị ahịa na-eto eto n'akụkụ a.
Ihe omumu: I choro ihe doro anya na obi ike ịkọwa ihe ị bụ a Onye na -akwụ ụgwọ.
Dabere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, nke a nwere ike iwe obere oge iji zụlite. N'ihe banyere e-commerce, mgbe mgbe, onye ọrụ nwere ike ịga Onye na -akwụ ụgwọ na asịwo ngwa ngwa, so an tinye na ụgbọ ibu na Cartzụta ụgbọ ezi uche.
Usoro a nke na-aga site Onye na -akwụ ụgwọ site Anya, na- Shopper, na- asịwo bụ nke m kpọrọ mbugharị. Ọ bụ ikike nke atụmanya ịhọrọ ịmekọrịta azụmahịa na ọkwa dị omimi ma dị omimi ruo mgbe ha họọrọ ịghọ onye ahịa.
Tags: tinye na ụgbọ ibuzụta ugbu aomume ahiakpọọ ka emeiheanachoe-azụmahịaecommerceonye na -akwa ngangaonye nlerendị na -ele anyangwa ahịa n'ịntanetịonline erengwa puoshopperzụọ ahịa ka onye ahịa